Hamba uye kwiiNdawo ze-Iconic Seminyak ukusuka kwiVilla Orked 2
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguFaridah
Buza ababuki zindwendwe ukuba balungiselele i-BBQ, epheleleyo kunye nabadanisi baseBalinese, umzekelo nje wezinto ezongezelelweyo ezikhoyo. Emva kokuntywila echibini elinezityalo eziluhlaza, snuza kumandlalo wosuku olujingayo, ngaphambi kokuba ubuyele kwindawo yangaphakathi evulekileyo yesiqhelo.
“Njengoko iVilla Orked ilikhaya lethu leeholide, siyinike uthando nenkathalo, ukwabelana nondwendwe lwethu”
- Faridah, umbuki zindwendwe wakho
Ibhedi elala abantu ababini, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatrasi waphantsi, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.96 (iingxelo zokuhlola 45)
Indawo iseJalan Mertanadi, kufutshane neJalan Sunset Road. Hamba uye kwiivenkile zokutyela, kunye neendawo zokutyela ezidumileyo kunye neekhefi ezifana neNaughty Nuris kunye noGusto Gelato. Thatha uhambo olufutshane ukuya ePetitenget ukuze ufikelele kwiindawo zehip ezifana ne-KU DE TA, Sarong, kunye neNtloko yePotato.
Umgama ukusuka eBali Ngurah Rai International Airport
Umbuki zindwendwe ngu- Faridah
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kuta Utara